अमेरिकामा आ’गला’गी हुँदा तीन बालबालिका सहित ५ नेपालीभाषीको मृ’त्यु, कारण अस्पष्ट ! - Thulo khabar
अमेरिकामा आ’गला’गी हुँदा तीन बालबालिका सहित ५ नेपालीभाषीको मृ’त्यु, कारण अस्पष्ट !
वासिंगटन डिसी : अमेरिकाको ओहायो राज्यको एक्रोन शहरमा बसोबास गर्ने ५ नेपालीभाषी भुटानीको घरमा आगलागीका कारण मृ’त्यु भएको छ। सेप्टेम्बर १२ तारिक आइतवार राति भएको सो घ’टनामा मृ’त्यु हुने ५ जनामा ३ जना बालबच्चा परेका छन्।
एक्रोन नर्थहिल क्षेत्रको लिन्डेन एभेन्यु ११०० ठेगानामा रहेको घरमा राति आ’गलागी भएको थियो । द समिट काउन्टी मेडिकल अफिसले रातिको आ’गलागीमा ५ जनाको मृ’त्यु भएको पुष्टि गरेको छ। स्थानीय संचारमाध्यम न्यूज फाइभ क्लिभल्याण्डसँग कुरा गर्दै याम सुब्बाले सो
आगलागीमा परी आफ्ना बुबा, कान्छी आमा र तीनजना बच्चाहरुको मृ’त्यु भएको बताएका छन्। उनले सो संचारमाध्यमसंग मृ’तक परिवारको फोटो पनि शेयर गरेका छन् । आ’गलागीमा परी अरु ४ जना घा’इते भएको र उनीहरुको स्थानीय अस्पतालमा उप’चार भइरहेको बताइएको छ।
सुब्बाको घरमा आ’गो द’नदनी भएको छिमेकीले देखेपछि छिमेकीले नै अ’पतकालीन सेवा ९११ लाई फोन गरेका थिए।
समाचारअनुसार, घ’टनास्थलमा रातिको १ बजे अ’ग्नि नि’यन्त्रकहरु आइपुगेको र त्यसबेलासम्म सुब्बाको घर ज’लेको र छिमेकको घरमा पनि सामान्य क्ष’ति पुगेको बताइएको छ।
समाचारअनुसार, एकै परिवारका चारजना बस्ने गरेकोमा केही दिनदेखि छोरी ज्वाईं नाताका ४ जनाको परिवार पनि सो घरमा बस्न पुगेको थियो। राति ए’क्कासि आ’गलागी भएपछि सो घरमा बस्ने अर्का एकजना लोग्ने मान्छे भने झ्या’लबाट हा’म्फा’लेर बाँच्न सफल भएका थिए भने छोरी ज्वाईंको परिवारका ४ जनामध्ये ३ जना बाँ’च्न सफल भएका छन्।
आ’गलागीको कारण के थियो र सो घरमा घ’टना भएको रात कति मानिसहरु थिए भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । आ’गलागीको घटना थाहा पाएपछि स्थानीय भु’ट्नीज कम्युनिटी ए’शोसिएसन अफ एक्रोन इन्क भन्ने सामाजिक संस्थाका अध्यक्ष मनोरथ खनाल र अन्य नेपालीभाषी स’मुदाय घ’टनास्थल पुगेका थिए।
खनालका अनुसार, के कारणले आ’गलागी भएको भन्ने स्पष्ट भएको छैन। उनले भने,“नेपाली भाषी समुदायका लागि यो ज्यादै दुः’खदायी घ’टना भएको छ, सरकारले यसको अनुस’न्धान गरी तथ्य पत्ता ल’गाइदिन्छ भन्ने आशा छ। कुनै ष’ड्य’न्त्र रहेछ भने पनि पत्ता लगाएर परिवारलाई न्या’य होस्।”